INtsumpa etyholwa ngokugqogqa amatyeli esikolo ngoku ifuna ukuba amapolisa amhlawule isigidi seerandi. - Usnews
INtsumpa etyholwa ngokugqogqa amatyeli esikolo ngoku ifuna ukuba amapolisa amhlawule isigidi seerandi.
Izikolo zikaRhulumente zaseKenilworth / ngokuVia Facebook: KenilworthBOE
Intsumpa yesikolo ebanjelwe ukurhanelwa ngokuthatha indawo yokulahla yonke imihla kwibala laseNew Jersey nakwibala lebhola ekhatywayo uyawushiya umsebenzi wakhe kwaye umangalela amapolisa ngesigidi seerandi, esithi bamosha igama lakhe.
Ityala le-pooper eliyimfihlakalo ekuqaleni liye laphazamisa abasebenzi beSikolo samaBanga aPhakamileyo saseHolmdel. Abaqeqeshi bomzila kunye nabasebenzi baya kufumana ilindle lomntu kwibala kunye nebala lebhola ekuseni, kwaye bacela uncedo kwipolisa lesikolo.
Emva kokubeka iliso, amapolisa aselokishini yaseHolmdel achonge umrhanelwa: INtsumpa yeZikolo zikaRhulumente zase-Kenilworth uThomas Tramaglini, owayehlala kufutshane kwaye ebeza kubaleka kusasa ebaleni, NJ.com ingxelo . NgoMeyi wabekwa ityala lokuziphatha kakubi, ukulahla inkunkuma, kunye nokuzikhupha esidlangalaleni.
Ngoku, ngokwebango letyala elipapashwe yi Asbury Park Press , I-Tramaglini ifuna ubuncinane i-1 yezigidi zeedola kwisebe lamapolisa, ibanga ukuba ukukhululwa kwe-mugshot yakhe yayichasene nomthetho waseNew Jersey. Ibango lichaza umvuzo wakhe olahlekileyo - wafumana i-147,500 yeedola ngonyaka njengomphathi-kunye nokuhlasela kwangasese, ukulimaza igama lakhe, kunye nokukhathazeka ngokweemvakalelo okubangelwa kukukhululwa kwefoto.
NgoLwesine, kwisithili ibhengezwe UTramaglini uza kurhoxa njengentsumpa ekupheleni kukaSeptemba.
'Ngokusekelwe kwiziganeko ezingahambelani nenkonzo yakhe kuKenilworth, kuye kwacaca kubo bobabini uDkt Tramaglini kunye neBhodi yeMfundo yeKenilworth ukuba inkonzo yakhe eqhubekayo njengoMlawuli weZikolo ibe yinto ephazamisayo kakhulu kumsebenzi oyintloko wesithili,' amagosa abhengezwa.
Kwisiteyitimenti, uTramaglini uthe wenze isigqibo ngokusekelwe kwiinkqubo zakhe zomthetho eziqhubekayo.
'UGqr. I-Tramaglini iya kuqhubeka nokulwa nezityholo ezenziwe kuye eHolmdel, kwaye iya kubamba abo banoxanduva lwengxelo ekhohlakeleyo esasazwe ngaye ukuba baphendule ngokuziphatha kwabo kakubi, 'utshilo igqwetha lakhe uMatthew Adams kwingxelo. 'UGqr. UTramaglini uzinzile kwisigqibo sakhe, kwaye ujonge phambili kumhla apho ibali lakhe elipheleleyo linokuxelwa.'
ubuso obuhle be-jack O'lantern
uphawu lwekrisimesi olumnandi ngaphandle
imivalo yendlu yakho